ABagwebi 7 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
7 UYerubhahali,+ oko kukuthi, uGidiyon,+ nabo bonke abantu ababekunye naye, bavuka ekuseni bamisa inkampu equleni laseHarodi; yaye inkampu yakwaMidiyan yayingasentla kwakhe, kwinduli kaMore, entilini. 2 Ke kaloku uYehova wathi kuGidiyon: “Abantu onabo baninzi kakhulu ukuba ndinganikela uMidiyan esandleni sabo.+ Mhlawumbi uSirayeli angazigwagwisa+ nxamnye nam, esithi, ‘Ndazisindisa ngesandla sam.’+ 3 Ke kaloku, nceda, memeza ezindlebeni zabantu, uthi, ‘Ngubani na owoyikayo nongcangcazelayo? Makarhoxe.’”+ Ngoko uGidiyon wabacikida. Ngoko, amashumi amabini anesibini amawaka abantu arhoxa, yaye yaba lishumi lamawaka elasalayo. 4 Sekunjalo uYehova wathi kuGidiyon: “Basebaninzi gqitha abantu.+ Behlisele emanzini ukuze ndikucikidele bona apho. Kwaye kuya kuthi nabani na endithe kuwe ngaye, ‘Lo uya kuhamba nawe,’ nguye oya kuhamba nawe, kodwa wonke ubani endithe kuwe ngaye, ‘Lo akayi kuhamba nawe,’ nguye ongayi kuhamba.” 5 Ngoko wabehlisela emanzini abantu.+ Waza uYehova wathi kuGidiyon: “Wonke ubani oxhapha amanzi ngolwimi lwakhe kanye njengokuxhapha kwenja, uya kumbeka yedwa, naye wonke ubani ogoba phantsi ngamadolo ukuze asele.”+ 6 Kwaye inani labo baxhaphayo ngokusa isandla emlonyeni laba ngamadoda angamakhulu amathathu. Bonke ke abanye abantu, bagoba phantsi ngamadolo ukuze basele amanzi. 7 Ke kaloku uYehova wathi kuGidiyon: “Ndiya kunisindisa ngala madoda angamakhulu amathathu aye axhapha, kwaye ndiya kumnikela uMidiyan esandleni senu.+ Ke bona bonke abanye abantu, ngamnye makaye endaweni yakhe.” 8 Ngoko awuthabatha umphako wabantu ezandleni zabo, nezigodlo zabo,+ yaye wawandulula onke amadoda akwaSirayeli ngamnye waya ekhayeni lakhe; wagcina amadoda angamakhulu amathathu. Ke yona inkampu yakwaMidiyan, yayisezantsi kwakhe entilini.+ 9 Yaye kwathi ngobo busuku+ uYehova wathi kuye: “Vuka, yehlela enkampini, kuba ndiyinikele esandleni sakho.+ 10 Kodwa ukuba uyoyika ukuhla, yihla, wena noPura umlindi wakho, niye enkampini.+ 11 Kwaye umele uphulaphule oko bakuthethayo,+ yaye emva koko izandla zakho ngokuqinisekileyo ziya komelela,+ kwaye uya kuqiniseka ngokwehlela enkampini.” Ngoko yena noPura umlindi wakhe behla baya esiphelweni sabo baxhotyiselwe idabi enkampini. 12 Ke kaloku uMidiyan noAmaleki nabo bonke abantu baseMpuma+ babethe waca entilini bebaninzi okweenkumbi;+ neenkamela zabo+ zazingabaleki, zazininzi njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle. 13 Ke kaloku uGidiyon weza, yaye, khangela! kwakukho indoda ebalisa iphupha kwiqabane layo, yahlabela mgama yathi: “Nali iphupha endiliphuphileyo.+ Kwaye khangela! kwakukho iqebengwana elibusazinge lesonka serhasi liqengqelekela enkampini yakwaMidiyan. Laza lafika ententeni layibetha yawa,+ layiphethula, yawa bhuma intente.” 14 Laza iqabane lakhe laphendula+ lathi: “Ayikho enye into, likrele likaGidiyon+ unyana kaYowashe, indoda yakwaSirayeli. UTHIXO oyinyaniso+ umnikele uMidiyan nayo yonke inkampu esandleni sakhe.”+ 15 Kwathi kamsinya nje akuva uGidiyon ukubaliswa kwephupha nokucaciswa kwalo,+ wanqula.+ Emva koko wabuyela enkampini yakwaSirayeli waza wathi: “Vukani,+ kuba uYehova uyinikele esandleni senu inkampu yakwaMidiyan.” 16 Waza wawahlula amadoda angamakhulu amathathu angamabutho amathathu wabeka izigodlo+ ezandleni zawo onke neengqayi ezinkulu ezingenanto, nezikhuni zomlilo ngaphakathi kweengqayi ezinkulu. 17 Wahlabela mgama wathi kuwo: “Nifanele nifunde ngokondela kum, yaye leyo yindlela enifanele nenze ngayo. Ndakufika esiphelweni senkampu, kuya kuthi kanye ngendlela endiya kwenza ngayo, nani nenze ngayo. 18 Ndakuvuthela isigodlo, mna nabo bonke abakunye nam, nani nimele nivuthele izigodlo, nani, nijikeleze inkampu yonke,+ kwaye nimele nithi, ‘ElikaYehova+ nelikaGidiyon!’” 19 Ekuhambeni kwexesha uGidiyon wafika namadoda alikhulu awayekunye naye esiphelweni senkampu ekuqaleni komlindo waphakathi kobusuku.+ Babesandul’ ukugqiba nje ukumisa abalindi. Kwaye bavuthela izigodlo,+ baza baziqhekeza iingqayi ezinkulu zamanzi ezazisezandleni zabo zaziingceba.+ 20 Koko amabutho amathathu avuthela izigodlo+ zawo aza azaphula iingqayi ezinkulu, aziphatha ngezandla zasekhohlo izikhuni zomlilo zawo kwaye ngezandla zawo zasekunene aphatha izigodlo awayezivuthela, aza amemeza, athi: “Ikrele likaYehova+ nelikaGidiyon!” 21 Ngalo lonke elo xesha baqhubeka bemile ngamnye endaweni yakhe macala onke enkampini, kwaye babaleka bonke ababesenkampini, bakhwaza, basaba.+ 22 Amakhulu amathathu+ aqhubeka evuthela izigodlo,+ yaye uYehova wamisa ikrele lakhe ngamnye nxamnye nomnye kuyo yonke inkampu;+ kwaye abo babesenkampini baqhubeka besaba ukuya kufikelela eBhete-shita, ukuya eTserera, ukuya kufikelela kwimimandla engaphandle yaseAbheli-mehola+ ngaseTabhata. 23 Ngelo xesha amadoda akwaSirayeli abizelwa ndawonye ukusuka kwaNafetali+ nakwa-Ashere+ nakulo lonke elakwaManase,+ kwaye asukela+ uMidiyan. 24 Yaye uGidiyon wathumela abathunywa kuwo wonke ummandla weentaba wakwaEfrayim,+ esithi: “Yihlani niye kuhlangabeza uMidiyan nize niwathimbe ngaphambi kwakhe amanzi ukuya kufikelela eBhete-bhara naseYordan.” Ngoko abizelwa ndawonye onke amadoda akwaEfrayim, kwaye awathimba amanzi+ ukuya kufikelela eBhete-bhara naseYordan. 25 Athimba neenkosana ezimbini zakwaMidiyan, ezizezi, uOrebhi noZehebhe;+ kwaye uOrebhi ambulalela kwiliwa likaOrebhi,+ aza uZehebhe ambulalela kwifatyi yewayini kaZehebhe. Kwaye aqhubeka emsukela uMidiyan,+ eza nentloko kaOrebhi nekaZehebhe kuGidiyon kummandla waseYordan.+